Kalandar - Gpedia, Your Encyclopedia
Maalintiris (; ) waa magaca guud ee xisaabinta iyo tirinta wakhtiga, taasi oo inta ugu badan lagu xisaabiyo maalin, todobaad, bil iyo sanad.
Dunida aan ku noolnahay waxaa jira tiro badan oo Kaalendaro ah kuwaasi ooy isticmaalaan qoomiyado iyo dalal kala duwan. Kuwa ugu caansan ee dunida inteeda ugu badan laga isticmaalo waxaa ka mid ah: Kalandarka Miilaadiga, Kalandarka Hijriga, Kalandarka Itoobiya, Kalandarka Shiinaha, Kalandarka Yuhuuda iyo kuwo kale oo badan.
Taariikhda miilaadiga waxaa lagu xisaabiyaa tirs-bileed, mana la xiriiro dabiicadda sida dayaxa iyo qorraxda.
Kalandar, Maalintiris (; ) waa nidaam lagu habeeyo, xafido, xisaabiyo wakhtiga maalmaha, todobaadka, billaha, sanadada, qarniyada iyo wixii ka badan. Kalandarka wuxuu dadka ka caawiyaa ineey aaqoonsadaan ciidaha iyo dabaaldegyada diiniga, bulshooyinka, ganacsiga ama ujeedooyinka maamulka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalandar&oldid=157969"